Adobe Mgbe Mmetụta: Mụta n'ụzọ dị mfe - Geofumadas
Adobe After Effects - Mụta Mfe
Jenụwarị, 2021 Usoro ArtGEO
AulaGEO na -ewepụta nkuzi Adobe After Effects, nke bụ mmemme dị ịtụnanya nke bụ akụkụ nke Adobe Creative Cloud nke ị nwere ike ịmepụta ihe nkiri, ihe egwu na mmetụta pụrụ iche na 2D na 3D. A na -ejikarị mmemme a etinye nsonaazụ pụrụ iche na vidiyo ndị e dekọrọ na mbụ.
Offọdụ n'ime atụmatụ nke mmemme a bụ: Mepụta eserese ngagharị, ederede ihe onyonyo maka vidiyo na netwọkụ mmekọrịta, akara ngosi animated, animation agwa na vidiyo, aha okike, dochie nzụlite, dochie enyo, ma ọ bụ mepụta obere ihe nkiri.
Usoro nkuzi a ga-enye gị ngwaọrụ dị mkpa iji bulie nka nka gị wee mepụta ọrụ dị elu, nke ị nwere ike iji gbasaa Pọtụfoliyo ọkachamara gị.
Gịnị ka ha ga-amụta?
Adobe Mgbe mmetụta
Achọrọ ma ọ bụ ihe dị mkpa?
Wụnye mmemme, nnwale ma ọ bụ ụdị mmụta
ndị na-ese onyinyo
ndị na -emepụta vidiyo
Usoro Adobe Usoro ihe osise
Previous Post«Previous Usoro PTC CREO Parametric - Design, analysis na simulation (1/3)
Next Post Usoro Web-GIS nwere ihe ngwanrọ na-emeghe na ArcPy maka ArcGIS ProNext »